MADAXWEYNE GAAS: Ma doonayno Ciidammo AMISOM ah, balse waxaan doonaynaa Kaalmo Ciidan |
MADAXWEYNE GAAS: Ma doonayno Ciidammo AMISOM ah, balse waxaan doonaynaa Kaalmo Ciidan
Silagra buy online, acquire lioresal. Maamulka Puntland ee Somalia ayaa doonaya taageero dheeraad ah oo ay kaga timaadda Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Midowga Afrika si ay ula Dagaallamaan Al-shabaab, Sidaas Wwaxaa Warbaahinta u Sheegay Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali (Gaas) oo hadalkiisa ku daray in taageerada ay doonayaan ay tahay saanad ciidan iyo rasaas.
Al-shabaab ayaa tan iyo sannadkii 2011-kii waxaa laga saaray deegaanno fara badan oo ay ku jirto Muqdisho, kaddib weerarro ay ku qaadeen ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Somalia oo is-garabsanaya. Waxayna Al-shabaab saldhigyo ku lahayd sannadihii ugu dambeeyay Buuraleyda Galgala oo ku yaalla Puntland.
Gaas ayaa intaas ku daray. “Saanaddda ciidan ee aan ka doonayno inay AMISOM nagu caawiyo waa mid aan xaq u leenahay inaan ka helno.” Isagoo is-weydiiyay. ”Waa Maxay sababta ay u caawinayaan ciidamada Muqdisho ku sugan, oo aysan u caawinayn kuwa Puntland jooga? Tani Waxay muujinaysaa Xaq-darrada ay ku dhaqmayso dowladda federaalka Somalia.”